Faah-Faahin: kulankoodii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad oo maanta ka furmay Muqdisho – Kalfadhi
Kulanka Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa maanta oo Sabti ah taariikhdana ay ku beegantahay 19 Oct waxaa uu ka furmay Magaalada Muqdishu.
Kulanka ayaa ah kulankoodii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad ee xildhibaannada, kaas oo uu ajandihiisu yahay hadal Jeedinta Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Akhrinta 1-aad ee Heshiiska Ilaalinta Hiddo Dhaqameedka aan muuqan iyo Heshiiska Khuseeye Ilaalinta Hidda Dhaqameedka & Midka Dabiiciga.
Tifaftirayaasha Kalfadhi, ayaa oggaaday in ay jiraan xildhibaanno ka maqnaan-doonna kullanka kuwaas oo wali dalka dibadiisa ku maqan.
Kulankan ayaa ka dhacaya Xarunta Villa Hargeysa ee xeyndaabka Madaxtooyada, maadaama xarunta Golaha Shacabka dhowaan dib loo dhisi doono. Xarunta Villa Hargeysa oo horay u aheyd Hoy iyo Xafiisyada Guddoonka Golaha Shacabka ayaa dhowaan dib u dhis lagu sameeyay, iyadoo hoolal ay ku shiri karaan Xildhibaanada iyo xafiis loo qalabeeyay.
Akhristayaal waxaan goor-dhow idin soo gudbin doonnaa, tiradda xildhibaan ee ka maqan kulanka. Fadlan si aad u hesho macluumaad siyaado ah, mar-walba cusbooneysiiso bogga-Kalfadhi.
Wax kasta oo aad dooneyso in aad ka oggaato kulankii dhex-maray Guddoonka Labada Aqal iyo Guddiga dib-u-eegista Dasuurka?